Unitydị n'otu na OpenSUSE? Mba Site na Linux
Unitydị n'otu na OpenSUSE? Mba
Ugboko92 | | Ọdịdị / Nhazi, GNU / Linux, Noticias
N’abalị ụnyaahụ, mgbe ọ fọrọ nke nta ka ọ lakpuo ụra, echetara m ihe m gụrụ ọnwa ole na ole gara aga, bụ́ nke kọwara na ọ na-akpa àgwà Ịdị n'Otu en openSUSE, n'okwu a, Dị n'otu 2D. Mgbe anyị kwusịrị ọtụtụ okwu na blọọgụ na forums, ọnwa gafere ma anyị enwetaghị ozi ọ bụla sitere na openSUSE, na ihe ọganihu nke ọrụ ahụ.
Emechara m kpebie ịkpọtụrụ ndị mmepe nke Meghee , onye zara m:
Ọdụ ụgbọ nke Unity ka openSUSE adịghị ndụ ọzọ, onye na-eme ya na mbu enweghi mmasi na oghereSUSE enyego otutu desktọọpụ, enwechaghị mmeghachi omume ziri ezi banyere ịdị n'otu OpenSUSE Mgbalị ndị ọzọ batara.
Portgbọ mmiri Unity adịghị ndụ, onye mere ya na mbụ enweghịzi mmasị, na Opensuse na-enye ọtụtụ gburugburu desktọọpụ, enweghị mmetụ dị mma n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ, mbọ ndị ọzọ na-agabiga.
Ya mere, dabaa na olileanya nke ịhụ Ịdị n'Otu en openSUSE, onye ọ bụla nweere onwe ya ikwu echiche ya, ma n'ikpeazụ ọ dị ka ọ bụ naanị Canonical ị nwere mmasị ị na-arụ oche a Shei).
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ọdịdị / Nhazi » Unitydị n'otu na OpenSUSE? Mba
Ọ bụrụ na likesdị n'otu na-enwe mmasị maka nwamba 4, ọ bụghị kpatara ndị ọrụ.
Onye ọ bụla na-eme mkpebi a maka ihe.
Nwamba 4 = Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla na-eji Ubuntu na nsụgharị ya na Unity? : O XD
Eeh, ọtụtụ na-ahọrọ Gnome Shell ma ọ bụ gburugburu ndị ọzọ, ị bụ ezigbo ihe atụ maka na ị na-eji Kubuntu.
Anọ m na-eji Kubuntu kemgbe tupu Unity dịrị, yabụ enweghị m ike ịgwa gị ma m bụ ezigbo ihe atụ ma ọ bụ abụghị xD
Unitydị n'otu nwere ihe ọma ya, ihe na-atọ m ụtọ bụ Lens, enwere ihe yiri nke ahụ maka KDE?
Nope, ma ọ dịghị ihe ọzọ ọ bụghị nke m maara
O doro anya na nke ahụ ga-eme. OpenSUSE bu ogbe obodo, gini g’eme ka akwado gburugburu ebe na adighi? Ihe ndị na-ahọrọ GNOME ma chọọ ịchekwa ahụmịhe mwute nke Shell ga-achọta bụ nchekwa nke ọma na Cinnamon.
Zaghachi na MetalByte
Kpọmkwem. Echere m na Ubuntu Ekwesịrị m ịkwụsị itinye ihe mgbochi dị ukwuu, yabụ Ịdị n'Otu ike ga-eji na ndị ọzọ distros, dị ka Debian ọmụmaatụ. Ọ bụ ihe kacha nta ka ha nwere ike ime.
Kpamkpam kwenyere, na-akwado ihe Ubuntu anaghị akwado ndị ọzọ, echere m na ọ bụ igbu oge ...
Onwe m, ọkacha mmasị m bụ shen gnome na ịdị n'otu, ịdị n'otu dị mfe iji, ihe na-eme bụ na ọ kabeghị "ntozu" nke shei gnome ma ọ bụ kde, ọbụlagodi na achọtara m anya m na ụzọ iji nabata desktọọpụ ahụ na-arụpụta Na kwa na compiz ya anya ikpọ, ihe ọjọọ bụ na ọ bụ isi ọwụwa iji hazie ya, ọ bụ arọ na iji nwayọọ karịa gnome shei na-enye ụfọdụ nsogbu na compiz.
Na mmehie, ihe kachasị amasị m bụ eziokwu nke inwe nnwere onwe ịgbanwe ma jiri kọmpụta dị iche iche na Ubuntu m! 🙂
M na-agbazi gị, G-Shell etochabeghị, ọ kwesịrị itolite, mana ọ nọ n'ụzọ ka mma karịa Unity, a ga-ekwenye.
Unitydị n’otu adịghị njọ, ihe bụ na dịka ekwuru ya na mbụ, Canonical anaghị enye nkwado maka ịbubata desktọpụ a na sistemụ ndị ọzọ naanị n’ihi na, ọ dị mma, ọ chọghị ịma. Mgbe ụfọdụ Canonical na-akpa agwa dị ka Apple ma ọ bụ Microsoft, mana ọ bụghị ya mere a ga-eji maa Ubuntu ikpe, dị ka Obi ike na-eme mgbe niile, ebe ọ bụ na enwere ezigbo mgbagha obodo nke Ubuntu, dị ka LinuxMint.
ufffffffffff nwannem nwoke correctisimooo !! +100
Ọ bụ ihe m na-ekwu. Gaa na Ubuntu dị ka nkesa, yana nnukwu nchekwa, ọ bụghị dị ka Ịdị n'Otu na echiche monopolistic na echiche ahia (nke na-adịghị njọ) Akara Shuttlworth. Enwere ike iji ya Ubuntu na gburugburu desktọọpụ ọ bụla na voila. Ghọta na ihe mgbaru ọsọ nke Ịdị n'Otu ọ bụghị naanị ya Desktop, ma na-aga n'ihu: TV, Ekwentị, Mbadamba ..
Aghọtara ya ... enwere ike ịsị na iji mint mint na-eji ubuntu eme ihe mana enweghị ịdị n'otu?
kama .. Linux Mint na-eji nnukwu nchekwa ubuntu ??
N'ezie ọ na-eji ya, na-enye ya ya akpan akpan aka. Nke ahụ bụ ebe Cinnamon si bịa.
mgbe ahụ anyị nwere ike ikwu na ngwọta mara mma maka ubuntu bụ Linux mint xD
Ndị mmadụ dị ka Ubuntu ... na ọtụtụ na-elo na Unity (enweghị oge7mara). Nke a abụghị otu ihe masịrị Unity. New ka Linux ga-eleghị anya enwetaghị gị anya…. ma… maka m… mgbe ogologo oge dị otú ahụ nke mmepe ọ bụ ka infumable, ihe niile ọzọ mgbagwoju anya na abịakọrọ abụọ isi ebe…. na dịka ọ dị mkpa itinye "patches" na sistemụ ka njikọta ọrụ, wdg, wdg ... puufff.
Akụ nke desktọọpụ bụ ihe nweta Linux na oge na-etinye onye ọ bụla n'ọnọdụ ha - kedụ mgbe Canonical ga-akwụsị ịkwado?
Naanị ihe na-akpọ m site na Unity bụ anya m, ihe anyị ga-ahụ n'otu ụbọchị na KDE ma ọ bụrụ na onye mmemme na-anwa anwa. Maka na enwere ike nweta nkesa nke ihe ndị ahụ na KDE (Icon-Tasks Ebe a, Global Menu ebe ahụ na ọ bụ ya), na ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ejiri isiokwu plasma Elly.
ịdị n'otu ?? pfff ahahaha biko! Ọ masịrị m cinnamon .. Agaghị m aghọta ihe ndị mmadụ so na-eche mgbe ha mepụtara ya .. ha enweghị ike itinye ụlọ mmanya ahụ ma ọ bụrụ na ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri mana ha na-etinye ya n'akụkụ aka ekpe ka ị wee banye n'ụzọ
ndo maka m nsụpe m 😉
Aja gara n’ihu, ihe dị mma bụ na ha achọpụtala ọdachi ahụ ha mere kpọrọ ịdị n’otu ma ugbu a ha amatala ya nke ọma.
Obi dị m ụtọ na na mbipute 12.04 ị nwere ike iwunye "gnome-panel" nke bụ ụdị gnome 2 ma ọ bụ ma ọ dịghị ihe ọzọ ihe yiri ya. Nke a bụ otu sheba gnome3 kwesịrị ịdị ka nke a ... ọ dị ka gnome 2 ... ejiri m n'aka na ọtụtụ n'ime ha ga-etinye ngwugwu ahụ ... ma wepu ịdị n'otu na map na mwepụta ọzọ . ahaha
Ọ dị m ka RAE ga-anọ na nche maka carcamal
Obi ike gịnị ka RAE pụtara?
Spanishlọ akwụkwọ Royal Spanish.
Echere m na na mba niile na-asụ Spanish ha maara ya, ọkachasị site n'akwụkwọ ọkọwa okwu na ihe niile.
Na na na Venezuela ha nwere ụtọ asụsụ nke Andres Bello ...
hahahaha mma mma ugbua ma ọ bụrụ na m ghọtara .. ọ dị mma ka m rịọ mgbaghara ọzọ maka mmejọ m, etu ihe dị mkpa bụ na ha ghọtara ozi m.
@ jamin-samuel bụ ihe jọgburu onwe ya, "ị nwetara ozi ahụ" ọtụtụ anaghị ekwusi okwu banyere okwu ahụ ike.
Ànyị ga-alaghachi na mkpo okwu mkpoputa? Obi ike, ọ bụ ihe kwere nghọta n'ụzọ zuru oke na ị kwesịrị ikwu okwu ma dee nke ọma, a naghị agọnahụ ya, mana enwere ndị mmadụ, ọ bụ ezie na ọ na-ewute ya, na-eji ede ihe ọjọọ, na Venezuela na nke a bụ ihe otiti, ana m agwa gị.
Ihe bụ, na-ekwu okwu, na ịbụ nsụpe okwu, ezigbo nwa, ị nweghị ebe ọ bụla, ị naghị emezi ma ọ bụ mee ka onye ọ bụla ghọta ma, na njedebe, ihe ị na-eme na-enye onye ọrụ ma ọ bụ mmadụ nsogbu and a damn flame is created ... Naa ntakịrị ma dozie ihe a na-ahụ anya.
Ọfọn, ịkwesighi imeghe ọnụ gị, ị ga-enye m ọrụ na isiokwu gị na Hoyganismo.
Lee kwa onye kwuru na mbu ka agbaghara ya maka nsụpe.
Ọbụghị naanị na Venezuela, mana m makwaara HOYGANS ndị na-ekwu ihe n'ụdị Tuenti:
Anọ m na-eru uju, onwere pari? lego boy na saịtị
Kedu nke dị njọ karịa ihe anyị na-ahụ ebe a, na m na-atụgharị ha ma ha na-agwa m ka m fuo hahahaha.
Ga-ewepụ ịdị n'otu na map? Ọ bụrụ na ha ka tọhapụrụ mbipute 5.8
M na-ahọrọ Unitydị n'Otu (ọ bụ ezie na ọ bụghị nke ukwuu usoro atumatu nke Canonical), karịa Cinammon. Achọpụtara m ohere dị ukwuu maka mmegharị na ọtụtụ nyiwe, ahụrụ m ọmarịcha mma, ọ bụ ezie na ọtụtụ anaghị amasị ya, okwu Lens dị m mma karịa. Achọrọ m Xfce otu puku ugboro, nke m na-anwale ugbu a na ọ kwenyesiri m ike, karịa Cinammon. Ọ bụ naanị ekele onwe onye m.
Nke ahụ bụ nke gị na Cinnamon dị ịtụnanya.
Kedu otu, Cinnamon nwere ka ọ ghara ịmasị ihe ọ bụla?
Mfe dị mfe ma dị mfe padawan ... ịdị n'otu e mere maka oge a na meziri na 16: 9 usoro, nke i nwere ọtụtụ obosara ... Amaghị m banyere gị ma n'ọdụ ụgbọ mmiri dị n'otu bụ ihe bara uru ma na-anabata, karịa ọtụtụ ndị ọzọ na Linux, lens na hud bụ ihe ọzọ enwetara site na ịdị n'otu, ha na-ekwe ka ikike nchọta mpaghara dị elu karịa gnome shell, ọ bụ ezigbo gburugburu ebe obibi ọbụlagodi na ọ masịghị gị, maka ndị mmadụ na-achọ ịme ngwa ngwa enweghị ike ịghọta ihe kpatara ha ji tufue oke nsị na ya ...
Banyere pawuda, enweghị m mmasị n'echiche ma ọ bụ mmejuputa ... na kọmpụta ndị m nwalere nsonaazụ ya jọrọ njọ na enweghị isi ịsị na mmalite ... ọ dị ka kde dị njọ ... (echiche onwe onye)
Ọfọn, enwere m mmasị ịdị n'otu karịa gnome-shell na m na-arụkarị ọrụ. Ugbo mmiri adịghị ka ọ na-enye m nsogbu, ebe ọ na-arụ ọrụ oge niile n'aka ekpe nke ihuenyo ahụ, ebe ọ bụ na bọtịnụ windo dị. O yighị m ka ọ dị nwayọ n’ebe m nọ, n’agbanyeghi na enwere ọnọdụ dịkarịsịrị ike karịa ndị ọzọ, ọ dịka kde, ọsọ ahụ dịkarịsịrị njikọta nke ngwa ọrụ niile na ibe ya. O nwere ike ọ gaghị abụ panacea, mana a na-akatọkwa gnome-shell (ma ka na-akatọ) nke ukwuu, dịka mgbe kde4 pụtara, onweghị ebe ị ga-enweta ya. Ihe niile bụ uto ma nye ya oge ka ewere ya.
Ihe ọzọ bụ mkpebi Canonical ịghara ịzụlite ya karịa Ubuntu, mana ọ bụ ọrụ ha, na nke mbụ, ọ ga-arụ ọrụ na distro ha, mgbe ahụ ka a ga-ahụ ya
ianpock si dijo
ndị mmadụ gbanwee na xubuntu.
Akụkọ mere eme ...
Zaghachi na ianpock's
N'oge ahụ na Ubuntu na-esote ha na-eme ike ha niile (ha na-ekwuputakwa ya nke ukwuu) iji melite ọnọdụ GNOME Fallback nke ha ga-akpọ Omuma. Echeghị m na ọ bụ maka ịhụnanya nke ndị ọrụ ya na otu ọ ga - esi ... .. ọ ga - abụ n'ihi na ha na - ahụ ntị anụ ọhịa wolf. Na ihe m masịrị Ubuntu na ahpra ... ka ọ na-aga n'ihu.
Ọ gaghị aka mma ịgbalịsi ike, ọbụlagodi na ọ gbagwojuru anya, ịgụnye shei Gnome 3 n’otu ụzọ ahụ? Site na oge ha na-ahụ Gnome 3 Shell dị ka onye asọmpi siri ike na mbọ ha, ihe na-ezighi ezi na echiche ahụ.
kpamkpam .. oburu na ubuntu gunyere shei gnome ya gaara aga nke oma .. mana eleghi anya ha cheputara idi n’otu ka ha di iche na onwe ya site na Fedora .. ebe obu na Fedora na eji shei nkpu ..
jiri obi m n’aka m .. M gaara achọ karịa ma ọ bụrụ na Ubuntu kwadoro shei gnome kama ịdị n’otu.
Ha ma na Unitydị n'Otu abụrụla Ubuntu ihe Windows Vista na Microsoft.
Ma ugbua na imara ... gini ka ha ga enye anyi n’odinihu? ahahaha ọma ana m atụ anya na ọ bụ ihe bara uru
Enwere m obi abụọ na ya, karịa na ha ga-ewe iwe iji gbaa egbe dị ka ha na ndị enyi anyị na Redmond.
Kọmpat NchNhr na Zoo Menubar: Zoo ogwe menu na Thunderbird
LMDE Mmelite Pack 4 na Gnome 2 ndị ọzọ